MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): May 2006
Current Mandalay Status
Posted by MgHla မောင်လှ at 11:22 pm
အင်တာနက်ကလည်းနှေး … မီးကလည်းပျက်… ရေကလည်းမလာ … ဒါ ကျတော်တို့ဘ၀ပါ…
အင်တာနက် နှေးပုံများကတော့ ပြောပြချင်တော့ပါဘူး… google.com တောင် တက်လို့မရအောင်ကို နှေးပါပေ့…
အ ရင်က ၃ ရက်ပေါင်းရင် မီး ၂၄-နာရီလာနေရာက အခု ၄-ရက်ပေါင်းမှ ၂၄-နာရီ လျှပ်စစ်မီးလာတဲ့ စနစ်ကို မန္တလေးသူ/သား တွေ ခံစားနေရပါပြီ… ကျတော်တို့ဘက်တော့ ထရန်စဖော်မာအိုး ပေါက်လို့ မီးပျက်တာ (၁၀) ရက်လောက် ရှိပြီပေါ့… ဟိုဘက် အိုးပေါက်တဲ့လူတွေ ကျတော်တို့အိုးဘက် လာချိတ်ကြတာ မနိုင်လို့ ပေါက်တယ် ပြောတာပဲ…
ဒီလိုနဲ့ပဲ မန္တလေးမှာ သဘာဝရဲ့ အရသာကို ခံစားရင်း ကျတော် ပျော်ပျော်ကြီး နေပါတယ်…
မောင်လှ http://mghla.blogspot.com ကို ၀င်လို့ မရသဖြင့် ဓာတ်ချောစာဖြင့် ပေးပို့သည်....
Posted by MgHla မောင်လှ at 2:56 pm
အင်တာနက်က ပျက်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူး… အခု ပြန်ပွင့်လာတယ်… အရမ်းနှေးတာပဲ လိပ်ကတောင် အဖေခေါ်ရလိမ့်မယ်… မဟုတ်ဘူး.. ပက်ကျိကတောင် အဖေ ခေါ်ရလိမ့်မယ်… ပြန် ပိတ်ဦးမလား မသိ…
Google & Myanmar Unicode
သိပြီးကြပြီလား မသိ.... အရင်တုန်းက မြန်မာယူနီကုတ်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စာတွေကို Google မှာ ရှာလို့မရဘူးလေ... ဒီနေ့ ရှာကြည့်တာ ရှာလို့ရပြီဗျာ... ဒီမှာ ကြည့်ကြည့်ပါဦး...
ဆံပင် နှင့် နောက်ခံ သီးသန့် ခွဲထုတ်ခြင်း (Photoshop Tutorial)
Posted by MgHla မောင်လှ at 10:42 am
၁. ဓါတ်ပုံကို ဖွင့်ပါ… Color Mode ကို CMYK မှာ ထားပေးပါ… ဖိုင်ကို Save As နှင့် ပြန်သိမ်းပါ… ဖိုင်နာမည်ကို HairCutout ဟုပေးပါ…
၂. Channel palette ထဲမှ Black channel ကို Duplicate လုပ်ပေးပါ… (ဆံပင် အနီရောင်များပါက Magenta ၊ အ၀ါရောင်များပါက Yellow ကို ပွားပေးပါ)
Duplicate Channel dialog box ပေါ်လာလျှင် Name တွင် HairOnly ဟု ရိုက်ထည့်ပြီး OK ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ…
၃. Color Mode ကို Grayscale သို့ပြောင်းပေးပါ…
၄. Curve command ကိုသုံးပြီး နောက်ခံအရောင်နှင့် ဆံပင်အရောက် ကွဲပြား ခြားနား အောင်လုပ်ပါ…
၅. Color Range command ကို သုံးပြီး ဆံပင်နောက်မှာ ရှိနေတဲ့ နောက်ခံ အရောင်တွေကို select ပေးပါ…
Color Range dialog box ထဲမှာ select လုပ်ပေးမယ့် ဧရိယာကို အဖြူရောင်နဲ့ ပြပေးပါတယ်…
စိတ်ကြိုက် select ပေးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ OK ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ… နောက်ခံတွေကို select လုပ်ပြီးသား တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…
၆. Feather လေး 1 pixels လောက် ထည့်ပေးပါဦး… (Select menu -> Feather)
၇. Delete လုပ်လိုက်ပါ… ပြီးရင် ဒီ အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံ လေယာကို duplicate လုပ်ပြီး HairCutout လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ထဲကို ပို့ပေးပါ…
၈. မူလ အရောင်နဲ့ ဓာတ်ပုံ လေယာနာမည်ကို color လို့ပေးပြီး၊ အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံ လေယာကိုတော့ bw လို့ပေးပေးပါ…
၉. Color layer ကို duplicate လုပ်ပြီး color 1 လို့ အမည်ပြောင်းပေးပါ…
၉-၁. ဒီ color 1 layer ကိုရွေးထားပြီး Add Layer Mask ခလုပ်လေးနှိပ်ပေးပါဦး…
၉-၂. နောက်ခံမလိုတဲ့ဟာတွေကို select ပေး၊ color 1 layer Mask ကို click နှိပ်၊
Foreground color ကို အနက်‌ ရောင်‌ရွေးပြီး Paint bucket tool နဲ့ ထည့်လိုက်ပါ…
Select ပေးထားတဲ့ ဧရိယာ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်…
Color 1 အောက်မှာ ရှိတဲ့ layer တွေ အကုန်လုံးကို မမြင်ရအောင် ခဏပိတ်ထားမယ် ဆိုရင်
အောက်ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်…
၁၀. Layer Palette ထဲက bw လေယာရဲ့ thumbnail ပြတဲ့နေရာပေါ် Control key ဖိထားပြီး click တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ…
၁၁. Color 1 Layer Mask thumbnail ပေါ်ကျတော့ Control နဲ့ Shift Key ၂-ခု တွဲနှိပ် ထားပြီး click တစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ…
Bw နဲ့ color 1 Layer Mask ၂-ခုက ဧရိယာတွေကို ပေါင်းပြီး select လုပ်ပေးသွားတယ် ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…
၁၂. မူရင်းဓာတ်ပုံရှိတဲ့ color layer ကို Layer Palette ထဲကနေ select ပေး ပေး ပါ… ပြီးရင်တော့ Add Layer Mask ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပေးပါ…
၁၃. ခု Bw layer ကို ဖျက်လို့ရပြီဗျာ…
၁၄. Color လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လေယာကို duplicate လုပ်ပေးပါ… လေယာ နာမည်က color copy လို့ပဲ ထားလိုက်ပါ… ပြီးရင် အဲဒီလေယာကို Multiply လုပ်ပေးပါ…
ပိုပေါ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ color copy လေယာကို duplicate ထပ်လုပ်လိုက်ပါ…
ဖြူဖွေးသန့်စင်တဲ့ သွားကလေးတွေ လုပ်ရအောင်… (Photoshop Tutorial)
Posted by MgHla မောင်လှ at 8:06 am
ဖြူဖွေးလှပတဲ့ သွားကလေးတွေ ရဖို့အတွက် သွားတိုက်ဆေး အကောင်းစား သုံးစရာမလိုပါဘူး... အပြင်မှာ တကယ်မသုံးရင်တော့ သွားတွေပိုး စားကုန်လိမ့်မယ်နော်... ကဲ ဓာတ်ပုံထဲမှာ သွားတွေ ဘယ်လို ဖြူအောင် လုပ်ရမဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်...
၁. ဓာတ်ပုံမှာ ရှိတဲ့ သွားတွေကို Magic Wand Tool ကို အသုံးပြုပြီး select လုပ်ပါ… (Select menu ထဲက
Feather ပမာဏ နည်းနည်းလောက်ထည့်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်…)
၂. Layer Properties box အောက်ဘက်ပိုင်းက Create New Fill or Adjustment layer -> Hue/Saturation ကို ကလစ်ခေါက်ပါ…
၃. Hue/Saturation dialog box ပေါ်လာရင် Hue 10, Saturation -40, Lightness 40, ပြောင်းလိုက်ပါ… မိမိ ဓာတ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလို့ရပါတယ်…
၄. စိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုရင်တော့ OK ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါတော့…
U can change Font in Gtalk Program.....
Posted by MgHla မောင်လှ at 5:29 pm
Gtalk မှာ hack လုပ်ထားတဲ့ Arial font မရှိပေမယ့်လည်း မြန်မာလို သုံးလို့ရပြီ... မြန်မာလိုတင်မဟုတ် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာလုံးများ ပြောင်းလို့ ရနေပါပြီ... Gtalk program ရဲ့ Setting -> General -> Change Font button ပါလား မပါလား ကြည့်ပါ... ပါတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိတဲ့ font များကို အလွယ် တကူ ပြောင်းလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျား... မပါသေးဘူးဆိုရင်တော့ http://www.google.com/talk ကနေ ဗားရှင်းအသစ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်အင်စတောလုပ် သုံးပါ... မြန်မာလို ပြောင်းမယ် ဆိုရင်တော့ Unicode ဖြစ်မှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Gtalk program တစ်ခုလုံး ပြောင်းလိုက်တဲ့ font ဖြစ်သွားလို့ပါပဲ...
မောင်လှ ပျောက်ချက်သား ကောင်းနေခြင်း
၁၀ ရက်နေ့ကပဲ ရန်ကုန်က ပြန်ရောက်တယ်ကွ... ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်ပိုင်သုံးစရာ ကွန်ပျူတာကလည်း မရှိတော့.. ကပ်သုံးရတဲ့ ဘ၀ဆိုတော့ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်နိုင်ခဲ့တယ်...
အင်း ... ခေါင်းလျှော်ရည် လုပ်သားတစ်ယောက်အကြောင်း အနည်းငယ် ရေးချင်သေးတယ်... ငါ့ထိုင်ခုံက ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့ မရေးသေးပါဘူး...
သင်္ကြန်တွင်းတုန်းကလည်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သူဌေးလေးက ထိုင်ခုံဘယ်ထိုင်မှန်း မသိပါဘူး... ခြေတစ်ချောင်း ကျိုးသွားလေရဲ့လေ...
Myanmar News .. MALA & Hlaing Thar Yar Tsp
မာလ၀င်မွှေသွားတဲ့ လှိုင်သာယာမှ ဓာတ်ပုံများ http://pg.photos.yahoo.com/ph/gratuitousgunner/album?.dir=/51a6re2
NativeMyanmar Forum မှာ Limaster က လင့်ခ်ပေးထားတာပါ...
လာမယ့် (၇) ရက်နေ့ဆို သမီးလေး အေးချမ်းငြိမ်း (၉) လပြည့်ပြီ...
Posted by MgHla မောင်လှ at 7:56 am
လျှပ်စစ် မီတာခ အနိမ့်ဆုံး ၂.၅ ကျပ်(နှစ်ကျပ်ပြားငါးဆယ်)ကနေ ၂၅ ကျပ် (နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်) သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မီတာလာဖတ်သူမှ ပြောကြားသွားပါတယ်... ယခု မေလမှ စတင် အကျုံးဝင်ပါသတဲ့ဗျာ...
မန်းလေး-ရန်ကုန် နှင့် နိုင်ငံခြား အိုင်အက်စ်ပီ များနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ယခင်က switch ကို အသုံးပြုသည့်နေရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော router များကို အစားထိုးအသုံးပြုလိုက်ရာ နည်းပညာ အခက်အခဲအရ အင်တာနက် မြန်နှုန်းများ ယခင်ကထက် ကျဆင်းသွားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးရှိ မြန်မာတယ်လီပို့ အတွင်းသတင်းအရ သိရှိရပါသည်...
၀င်းသူဇာ အရောင်းဆိုင် ဈေးနှုန်းများ ပြင်ဆင် သတ်မှတ...
ဆံပင် နှင့် နောက်ခံ သီးသန့် ခွဲထုတ်ခြင်း (Photosho...
ဖြူဖွေးသန့်စင်တဲ့ သွားကလေးတွေ လုပ်ရအောင်… (Photosh...
ဟက်ကတ် လို အသားအရည် ချောမွေ့ချင်လား (Photo Retouch...
ဒီနေ့ မြန်မာတိုင်းမ်ကို ၀င်ကြည့်တော့ အောက်က ပြထားသ...